तालिवानले राजधानी कब्जा गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा अमेरिकाले चाल्यो यस्तो कडा कदम — Imandarmedia.com
तालिवानले राजधानी कब्जा गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा अमेरिकाले चाल्यो यस्तो कडा कदम
एजेन्सी। तालिबान लडाकुहरुले अफगानिस्तानको आधाभन्दा बढी प्रान्तीय राजधानीमा कब्जा जमाएका छन् । उनीहरु अब राजधानी काबुलभन्दा ११ किलोमिटरमात्रै टाढा रहेको समाचार एजेन्सी एपीले जनाएको छ । देशका ३४ मध्ये १९ प्रान्त र त्यसको राजधानी तालिवानको नियन्त्रणमा पुगेको छ ।
तालिवान लडाकूले अफगानिस्तानका प्रान्तीय राजधानी कब्जा गर्न थालेपछि अमेरिकाको पहिलो सैन्य टोली अफगानिस्तान आइपुगेको छ । केन्द्रीय राजधानी काबुलमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई उद्धार गर्न आएका हुन् ।
उनीहरुले अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी कुटनीतिज्ञ, कर्मचारीलगायतका अमेरिकी नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने भएका छन् । अफगानिस्तानमा सङ्घर्षरत तालिवान लडाकुको समूहले अहिलेसम्म अफगानिस्तानका आधाभन्दा बढी प्रान्तीय राजधानी आफूको नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको छ ।
अफगानिस्तानका एक स्थानीय प्रशासकले समाचार एजेन्सी एपीलाई भनेका छन्- तालिबान लडाकु अब केबल ११ किलोमिटर मात्रै टाढा छन् । यद्यपि सरकारको तर्फबाट भने यसको पुष्टि भएको छैन । बीबीसीले लेखेको छ- यदि तालिबानले काबुल कब्जा गर्यो भने यो अफगानिस्तान सरकार र सेनाका लागि निकै ठूलो झट्का हुने छ ।
यसबीच काबुलमा यतिबेला अन्योलको अवस्था रहेको छ । मानिसहरु अत्तालिएका छन् । कोही भने राष्ट्रपति असरफ घानीले राजीनामा दिने बताइरहेका छन् भने कोहीले तालिवानसँग लड्ने बताइरहेका छन् । सरकार र सैन्य अधिकारीहरुको सरगर्मी बढेको छ । शुक्रबार मात्र अशरफ घानीले राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर उच्च स्तरीय बैठक गरेका छन् । उनले आफ्नो राजीनामाबारे अनुमानलाई विराम लगाउँदै तालिबानसँग मजबुतीका साथ लड्ने बताए ।
बीबीसीका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा मात्र १ हजार बढी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका छन् । पछिल्ला केही दिनमा तालिवानले सरकारी मिडियाका प्रमुखदेखि राजनीतिक नेताहरुको हत्या गरेको छ । अमेरिका र बेलायतले आफ्नो दूतावासबाट कर्मचारीको संख्या कम गर्ने बताइसकेको छ । रुसले भने आफ्नो यस्तो कुनै योजना नरहेको बताएको छ ।
अफगानिस्तानमा तालिबानको बढ्दो पकडबीच नेटोका सहयोगी राष्ट्रहरुको शुक्रबार बैठक बसेको थियो । गठबन्धनले तालिबानको हिंसाको आलोचना गर्दै अफगान सरकारको समर्थन जारी राख्ने फैसला गरेको छ ।
देशभरी रहेका ३४ प्रान्तमध्ये १८ प्रान्तका राजधानी तालिबान लडाकुको नियन्त्रणमा रहेको उनीहरुले घोषणा गरेका छन् । अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सैनिक फिर्ता भएसँगै तालिबान लडाकूले राजधानी नै नियन्त्रणमा लिने अभियान सुरु गरेका हुन् । राजधानी कब्जा गर्ने अभियानमा उनीहरु निकै सफल देखिएका छन् ।
विदेशी सैनिक फिर्ता भएको दुई हप्ता मात्रै भएको छ भने लडाकूले एक हप्तादेखि प्रान्तीय राजधानी नियन्त्रणमा लिने अभियान चलाइरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि शुक्रबार अफगानिस्तानका एक मन्त्रीसँग कुराकानी गर्दै देशको अवस्थाका बारेमा चासो र चिन्ता व्यक्त । उहाँहरुको छलफलकै आधारमा शनिबार अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान आएको बताइएको छ ।
काबुलमा डर र निराशा
तालिबान लडाकुहरु राजधानी काबुलको जति-जति नजिक पुग्दैछन्, त्यति-त्यति मानिसहरुमा डर पैदा भएको वातावरण देख्न सकिने बीबीसीले जनाएको छ । शनिबार काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आतंकको वातावरण थियो ।
त्यहाँ अफगानिस्तानमा कार्यरत विदेशी नागरिक, दूतावासका कर्मचारी र अफगानिस्तानकै नागरिक कुनै न कुनै प्रकारले बाहिर जाने उपाय खोजीरहेका थिए । तालिबानले कब्जा गरेका क्षेत्रबाट भागेर काबुल पुगेका हजारौं मानिसहरु काबुलका सडक किनारमा बनाइएको अस्थायी क्याम्पमा बसिरहेका छन् ।
तालिबान नेतृत्व र सामाजिक सन्जालमा सक्रिय समर्थकहरुले भने तालिबानले नियन्त्रणमा लिएका क्षेत्रमा स्थिति सामान्य बन्दै गएको बताएका छन् । यसका साथै तालिबानले सबै वर्ग र समुदायका लागि काम गर्ने सन्देश पनि जारी गरिएको छ ।
यस्ता सन्देश तालिबान गुटहरुको तर्फबाट लगातार जारी गरिएको छ । यसको उद्देश्य तालिबानको आक्रमणअघि नै अफगान सैनिकले आत्मसमर्पण गरुन् भन्ने रहेको बीबीसीले जनाएको छ।
तालिलबान लडाकुहरुले बन्दी बनाएकाहरुलाई मार्छन् र युवतीहरुलाई तालिबान लडाकुहरुसँग बिहे गर्न बाध्य बनाउँछन् भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरुलाई खण्डन गर्न पनि यस्ता सन्देश जारी गरिएको अनुमान छ ।
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाहेक अन्य सहर तालिबानको कब्जामा :
यसैबीच, अमेरिकाले अफगानिस्तानको संकटग्रस्त देशबाट आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि ५ हजार सैनिक तैनाथ गर्ने बताएको छ ।सरकारी फौजहरूको विफलतासँगै राष्ट्रपति अशरफ गनीमाथि राजीनामा गर्न चर्को दबाव परेको छ।
काबुललाई जोगाउन उनीसँग आत्मसमर्मपण वा सङ्घर्षको विकल्प देखिएको छ। यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिकाले तनावग्रस्त अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार गर्नका निम्ति पाँच हजार फौज पठाउन लागेको जनाएको छ।
एउटा लिखित वक्तव्यमा उनले भनेका छन्ः यदि अफगान सैनिकले आफ्नो देशलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन्थ्यो वा राख्दैन्थ्यो भने अर्को पाँच वर्षसम्म पनि अमेरिकी फौज त्यहाँ रहेर कुनै फरक पर्दैनथ्यो।
आफ्ना पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सेना फिर्तीका लागि तोकेको म्याद र फौजको सङ्ख्या घटाएर नगन्य बनाउने निर्णय आफूमाथि आइपरेको बाइडनले उल्लेख गरेका छन्
जलालाबादमा के भयो?
तालिबान लडाकुहरूले एउटा पनि गोली नचलाई जलालाबादलाई आइतवार बिहान नियन्त्रणमा लिइएको विवरणहरूमा जनाइएको छ।
“जलालाबादमा अहिले कुनै भिडन्त भइरहेको छैन किनकि यहाँका गर्भनरले तालिबानसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्,” त्यहाँस्थित एक अफगान अधिकारीले समाचारसंस्था रोएटर्सलाई भने।
“तालिबानलाई अगाडि बढ्न दिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु नै नागरिकको ज्यान बचाउने एक मात्र बाटो थियो। जलालाबादमाथि तालिबानले कब्जा गर्नु भनेको छिमेकी मुलुक पाकिस्तानसँग जोडिएका सडक सञ्जालमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। यससँगै अफगानिस्तानका कुल ३४ वटा प्रान्तीय राजधानीमध्ये २३ वटा तालिबानको नियन्त्रणमा पुगेका छन्।
काबुलमा अफगान प्रहरी
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथि हमला भएको एक महिनापछि अमेरिकाले पनि अफगानिस्तानमा हवाई हमला सुरु गर्‍यो। तर तालिबानले अमेरिकामाथि हमला गर्ने ओसामा बिन लादेन अमेरिकालाई सुम्पिन अस्वीकार गर्‍यो। त्यसपछि अमेरिकासँग अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन जोडिन पुग्यो र तालिबान तत्कालै सत्ताबाट हट्यो।
यद्यपि उक्त समूह विद्रोही फौजमा परिणत भयो र घातक हमलाहरू निरन्तर जारी राख्दै अफगान सरकारलाई अस्थिर बनायो। अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले सन् २०१४ मा आफ्नो सैन्य अभियानअन्त्य गर्‍यो र अफगान फौजलाई तालिम दिनमा मात्रै आफूलाई सीमित राख्यो।
त्यसपछि तालिबानले देशभरि आफ्नो प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्न खोजेको थियो। आफ्नो नियन्त्रणबाट खोसिएका क्षेत्रहरू फेरि कब्जा गर्ने प्रयास तालिबान लडाकुहरूले गरे। तर अमेरिका भने एक्लैले हवाई हमलालगायत युद्ध कारबाही चलाएर निरन्तर सक्रिय रह्यो। तालिबानले पनि आफ्नो गतिविधि कायमै राख्यो।
के हो तालिबान? अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा पूर्वार्धमा एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान सुरु भयो। अधिकांश पाश्तुन समुदायका व्यक्तिहरू संलग्न भएको तालिबान अभियानबारे सन् १९९४ मा बारे धेरैले थाहा पाए। साउदी अरबबाट आएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामबारे पढाइने विद्यालयहरूबाट सो अभियान सुरु भएको विश्वास धेरैको छ।
पाश्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रहरूमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्ने वाचासहित आफ्नै इस्लामिक कानुन अर्थात् शरिया कार्यान्वयन गर्ने तालिबानको उद्देश्य थियो। तालिबानले दुवै देशमा हत्यारा र व्यभिचारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिन थाल्यो। चोरी गरेको प्रमाणित भए अङ्गभङ्गको दण्ड दिइन्थ्यो।
तालिबानको प्रभाव भएको क्षेत्रमा पुरुषले दाह्री पाल्नै पर्ने र महिलाले पूरै शरीर छोपिनेगरी बुर्का लगाउनै पर्ने बनाइयो।टीभी, चलचित्र र सङ्गीतमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। अनि १० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान दिइएन।